सिनेमा ‘दंगल’का लागि तौल बढाएर मोटो बनेका आमिर खान आगामी सिनेमा ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’का लागि तौल घटाएर पातलो बनेका छन् । त्यस्तै सिनेमाको चरित्र..
अर्जुन कपूरकी हजुरआमाले गरिन् श्री देवीको गर्भ तुहाउने प्रयास
बलिवुड सिनेमा निर्माता बोनी कपूरले अभिनेत्री श्री देवीसँग दोस्रो विवाह गरेका हुन् । उनले श्रीदेवीसँग विवाह गर्नको लागि पहिलो पत्नी मोना शौरीसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेका थि..
चर्चित म्यागजिन फोब्र्सले प्रकाशित गरेको ताजा रिपोर्टका अनुसार आमिर खानको सिनेमा ‘दंगल’ले वल्डवाईड २ हजार करोड भरतीय रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । वल्ड वाईड २ हजार करोड क..
सुन्दर देखिन सबैलाई मन लाग्छ । तर विशेष गरी अभिनेत्रीहरु यसमा बढी सजग र सचेत भएको हामी पाउँछौँ । अभिनेत्रीहरु सुन्दर देखिनको लागि के के सम्म गर्छन् ? त्यसको अन्दाज पनि ..
बलिवुड अभिनेत्री सनी लयोनीको डकुमेन्ट्री गत वर्षको टी आई एफ एफ र एम ए एम आई जस्ता फिल्म फेस्टिभलहरुको माध्ययमबाट वल्डवाईड रिलिज गरिएको थियो । दीलिप मेहताले बनाएका यो डक..
रणवीर यसरी गर्छन् कटरिनाको निगरानी
अभिनेत्री कटरिना कैफ यतिबेला सिनेमा ‘जग्गा जासुस’को प्रमोशनमा व्यस्त छिन् । उनी सिनेमाको प्रमोशनकै लागि सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय भएकी छिन् । सिनेमाका मुख्य अभिनेता र..
यी हुन् शाहरुखलाई सुपरस्टार बनाउने अभिनेता
अभिनेता शाहरुख खानको बविलुड यात्राले २५ वर्ष पूरा गरेको छ । २५ जुन १९९२ मा पहिलो पटक उनको सिनेमा ‘दीवाना’ रिलिज भएको थियो । सुपरहिट भएको यो सिनेमामा शाहरुख खानसँगै दिव्या भारती र ऋषि कपूरको पनि मुख्य भूमिका थियो । यो सिनेमाको सफलता पछि शाहरुखलाई कहिल्यै पनि पछि फर्केर हेर्नु परेन । तर धेरै कमलाई […]
‘सुल्तान’ बन्यो बेस्ट एक्शन फिल्म, शाहिदले छाडे घर– बलिवुड अपडेट
सलमान खान स्टारर सिनेमा सुल्तान संघाई ईन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिभलमा बेस्ट एक्शन फिल्म घोषित भएको छ । यो विधामा ज्याकि च्यान सहित हलिवुडमा ठूला स्टारहरुका सिनेमा पनि नोमिनेट भएका थिए । तर जनताको भोट र जजको नम्बरको आधारमा सिनेमाले बेस्ट एक्शन फिल्मको अवार्ड जितेका हो । यो सिनेमा यहि वर्षको अन्त्यसम्म चिनमा पनि रिलिज हुनेछ । [&helli..
दुई दिनमा कति कमायो सलमानको ट्युबलाईटले ?
ईदको अवसर पारेर रिलिज भएको सलमान खानको सिनेमा ट्युबलाईट शुक्रबार सिनेमा घरमा रिलिज भएको छ । एकातिर सिनेमाले सोचे भन्दा कम व्यापार गरेको छ भने अर्कातिर दर्शकले पनि सिनेमा आशा गरेजति राम्रो नभएको प्रतिकृया दिएका छन् । पहिलो दिन २१ करोड १५ लाखको व्यापार गरेको सिनेमाले दोस्रो दिन शनिबार पनि २१ करोड १७ लाख भारतीय रुपैयाँको […]
गर्भवति छिन् बिद्या बालन, भाईरल भए तस्बिर
बलिवुडमा यतिबेला अभिनेत्री बिद्या बालन गर्भवति भएको खबर भाईरल भएको छ । हालै मात्र उनका केही तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका छन्, जसमा उनको शरीरको बनावट पहिलेको तुलनामा पूर्णरुपमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । उनको यो रुप देखेपछि धेरैले उनी गर्भवति भएको अड्कल काटेका छन् । तर केही समय अघि मात्रै सन्तान कहिले जन्माउने ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा..
करिश्माले दोश्रो बिहे गर्दै- सञ्जय कपुरको तेश्रो बिहे
असार १० /बलिवुडकि चर्चित नायीका करिश्मा कपुरले दोश्रो बिहे गर्दैछिन । ४२ वर्षिया करिश्माको दोस्रो विहेको अहिले चर्चा छ । पूर्वपति सञ्जय कपुरले हालै प्रिया सचदेवसँग तेश्रो बिहे गरेपछि उनी पनि दोस्रो बिहेका लागि तयार रहेको खबर सार्बजनिक भएको हो । करिश्माले प्रेमी सन्दीप तोसनीवालसँग बिहे गर्न लागेकी हुन । सन्दीपको पनि यो दोश्रो बिव..
आधा भयो कपिलको पारिश्रमिक
कमेडियन सुनिल ग्रोभरले साथ छाडेपछि कपिल शर्माको शोको टि आर पी लगातार घटिरहेको छ । यहि कारण कपिलले आफ्नो पारिश्रमिक आधा बनाउनु परेको छ । भारतीय सञ्चार माध्ययमले उल्लेख गरे अनुसार कपिलले र च्यानलसँगको आपसी सहमतीमा पारिश्रमिक आधा बनाउने निर्णय लिएका हुन् । केही समय अघि कपिलले सोनी च्यानलसँग एक सय दश करोड भारतीय रुपैयाँको […]
ट्युबलाईटमा निर्देशकको पहिलो रोजाई अक्षय कुमार, जान्नुहोस् ट्यबुलाईटका अन्य रहस्य
सलमान खान स्टारर सिनेमा ‘ट्युबलाईट’ २३ जुन अर्थात शुक्रबार सिनेमाघरमा रिलिज भएको छ । यस सिनेमामा सलमानका विभिन्न अंदाहरु दर्शकले देख्न पाउनेछन् । कतै उनी बच्चाँग मस्ती गरेको देखिने छन् भने कतै डराएको, रोएको अवस्थामा पनि देखा पर्नेछन् । यो बाहेक पनि ट्युबलाईटका केही चाखलाग्दा कुराहरु छन् जसको बारेमा हामी तपाईँलाई जानकारी दिँदैछौँ..
छोराछोरी बिगार्ने १० खराब सेलिब्रेटी आमा
झिकेर मुटुको टुक्रा आँखा भित्र अटाउछिन आफु भोक भोकै बसी स्तन चुस्न खटाउछिन, जिन्दगी बन्छ आमाले खाएको गास गासमा सिर्जनामूल हुन् आमा सृष्टीको इतिहासमा, कवि कृष्ण प्रसाद भटटराईको आमा कविताका यी हरफ ले आमाको महत्व प्रस्ट पारेको छ । आमा ती हुन् जो आफू दुःखमा पनि हाँसेर छोराछोरीलाई हँसाउने गर्छिन् । सधैँ सहि र सत्कर्मका […]
आयशाले यसरी दिईन् ओठ सर्जरी नगरेको प्रमाण
अभिनेत्री आयशा टाकियाले ओठको सर्जरी गरेर आफ्नो लुक्स परिवर्तन गरेको खबर बिगत केही दिन यता चर्चामा थियो । उनको एक तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाईरल पनि बन्यो जसमा उनको अनुहारको आकार पहिलेको तुलनामा पूर्णरुपमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । तर आयशाले भने आफ्नो उक्त तस्बिर फोटोशपको माध्ययमबाट बनाईएको र आफूले ओठ सर्जरी नगरेको अभिव्यक्ति दिएकी ..